Real Madrid oo ka badisay Bayern Munich - BBC News Somali
Real Madrid oo ka badisay Bayern Munich
Image caption Qaab ciyaareedka Real Madrid ayaa lagu qiyaasay 39.7%
Kooxda Real Madrid ayaa guul ka soo hoyisay is araggii koobaad ee rubuc dhammaadka koobka Horyaallada Yurub ee ay la yeelatay Bayern Munich.
Ciyaartan Champions League ayaa ka dhacday garoonka Allianz Arena ee dalka Jarmalka.
Real Madrid oo difaacanaysa koobkan ayaana isku dayaysa in ay qaaddo markii saddexaad oo xiriir ah, inkastoo uu difaacoodu ladaalaa dhacayay weerarka Bayern Munich, haddana weerarkooda ayaa si wanaagsan u dheelay Marcelo iyo Marco Asensio ayaana labo gool kala dhaliyay labdii qaybood ee ciyaarta.
Bayern Munich ayaase goosha la hormatay waxaana u saxiixay Joshua Kimmich.
Gool uu dhaliyay Cristiano Ronaldo oo afka hore uga dheela Madrid ayaa la diiday ka dib markii uu gacanta ku dajistay kubbadda, waxaana sidaas ku soo idlaaday goolashii uu ciyaarkaste ka dhalinayay xilli ciyaareedkan.
Mourinho oo lagu eedeeyay in uu canshuur lunsaday
Ronaldo oo ku guulaystay laacibka FIFA
Bayern ayaa hadda u baahan in ay ugu yaraan labo gool ku dhaliso garoonka Bernabeu Talaadada soo socota, si ay Madrid uga hor istaagto in ay u gudubto ciyaartii afraad ee kama dambays ah ee ay ka qaybgalaan shan sano gudahoos.